गिटी-बालुवाको भाउ बढ्यो, एक तले घरमा कति लाग्छ खर्च? :: Setopati
निर्माण क्षेत्रमा अत्यावश्यक गिटी–बालुवाको मूल्य बढेको छ। गत चैतको तुलनामा निषेधाज्ञा खुकुलो हुनासाथ कालो गिटी, सेतो गिटी र बालुवाको मूल्य बढेको गोल्डेन निर्माण सप्लायर्स, बल्खुका सञ्चालक ऋषि खतिवडाले बताए।
निषेधाज्ञा अघिसम्म प्रति ठूलो टिपर पच्चीस–छब्बीस हजारमा पाइने धादिङको कालो गिटी हिजो आज दुई देखि तीन हजारले बढेर उनन्तीस हजारसम्म पुगेको उनले जानकारी दिए। त्यस्तै डबल वास बालुवाको मूल्य निषेधाज्ञा खुलेपछि तीस हजारसम्म पुगेको छ।
कालो गिटीको तुलनामा सेतो गिटी चार–पाँच हजार रूपैयाँ सस्तो पर्छ। खतिवडाका अनुसार भाउ बढ्दा सेतो गिटीको मूल्य प्रतिटिपर चौबीसदेखि पच्चीस हजार रूपैयाँ कायम भएको छ। यसअघि बीस–एक्काइस हजार प्रतिटिपर थियो।
'कालो गिटी, सेतो गिटी, बालुवा सबैको मूल्य औसत तीन हजारले बढेको छ। निर्माणको कामले गति लिए मूल्य अझै बढ्न सक्छ,' खतिवडाले बताए।
उनका अनुसार बर्खाको समयमा अरूबेला भन्दा बाटो खराब हुन्छ। ढुवानीमा समस्या आउँछ। त्यस्तै गिटी बालुवाको उत्खनन् कम हुन्छ र खोला किनारमा राखिएका सामग्रीमा क्षति पुग्न सक्छ। त्यसैले सुरक्षित गरेर स्टकमा राखिएका सामान मात्रै बेचिन्छन्। यस्तोमा माग धेरै आए क्रसर व्यवसायीले स्वतः मूल्य बढाउँछन्।
पेट्रोलियम पदार्थका भाउ बढेकाले पनि निर्माण सामग्रीको मूल्य बढेको उनको भनाइ छ।
'बर्खामा गिटी बालुवाको भाउ बढ्ने नै हो,' खतिवडाले भने, 'अहिले झन् डिजलको भाउ दिनदिनै बढेको छ। यसले पनि मूल्यमा असर पारेको छ।'
तेलको मूल्य अहिलेकै अनुपातमा बढ्ने हो भने निर्माण सामग्रीको मूल्य अझै बढ्ने खतिवडा बताउँछन्।
उनका अनुसार कोरोनाभन्दा अगाडि यही सिजनमा गिटी-बालुवा प्रतिटिपर चौंतीस हजार रूपैयाँसम्म पनि पुगेको थियो। दुई वर्षयता कोरोनाले निर्माण कार्य कम भएको छ। यस कारण अपेक्षित मूल्य नबढेको उनको भनाइ छ।
अन्य सामग्रीको मूल्य वृद्धि भइरहँदा आफूहरूले पहिलेकै मूल्यमा सामान ढुवानी गर्न नसक्ने खतिवडा बताउँछन्। त्यस्तै निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरको ज्याला बढेकाले पनि निर्माण सामग्रीको मूल्य बढेको उनले जानकारी दिए।
काठमाडौंका निर्माण क्षेत्रमा धादिङको माधवबेसी, बैरेनी, गजुरी, सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची खोला, भकुन्डेबेसी लगायत ठाउँबाट गिटी-बालुवा आउँछ। सिन्धुपाल्चोकको तुलनामा धादिङबाट आयात हुने गिटी-बालुवा गुणस्तरीय मानिन्छ।
एक तले घर बनाउन गिटी–बालुवामा कति खर्च लाग्छ?
करिब एक हजार वर्गफुटमा बनाइने चार कोठे एक तले घरका लागि पन्ध्र टिपर गिटी–बालुवा लागत अनुमान गर्नुपर्छ। खतिवडाका अनुसार गिटी र बालुवा उस्तै अनुपातमा खर्च हुन्छ।
बढेको मूल्य अनुसार एकतले घर बनाउन करिब चार लाख पचास हजार रूपैयाँ लागत छुट्याउनु पर्छ। चार महिनाअघि, गत चैतमा भाउ घटेको थियो। त्यतिबेला पचास हजारसम्म सस्तो पर्थ्यो।
'चार आनामा बन्ने चार कोठे ढलान घर फिनिसिङ गर्न चार लाख पचास हजार लागत छुट्याउनु पर्छ,' जानकारी दिँदै खतिवडाले भने, 'सात टिपर गिटी र आठ टिपर बालुवा भए सबै समेट्न सकिन्छ। ढलानका लागि राम्रो बालुवा चहिन्छ। डबल वास बालुवा राम्रो मानिन्छ। प्लास्टरका लागि सामान्य बालुवा भए पनि हुन्छ।'
छत ढलान नगरी बनाइने एकतले घरमा भने गिटी–बालुवाको लागत एक तिहाइ कम हुने उनले जानकारी दिए। उनका अनुसार धेरै मसला (गिटी-बालुवाको मिश्रण) ढलानमा खर्च हुनाले जस्ता पाता वा टायल छाना राख्दा कम खर्चमा काम सकिन्छ।
केही समययता काठमाडौंमा दिउँसोको समयमा टिपर चलाउन निषेध छ। राति मात्रै ढुवानी गर्नुपर्ने नियमले आफूहरू समस्यामा पर्दै आएको निर्माण व्यवसायीहरूको गुनासो छ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, साउन ८, २०७८, १५:००:००